IGAMA LOKUKHANYA OKWAHLUKANISEKILEYO NOMSEBENZI KWISITUDU SOKUDLULA
Ixesha Post: Okt-14-2021
Amagama kunye nemisebenzi yezibane ezahlukeneyo kwisitudiyo zezi zilandelayo: Isibane esingundoqo: khanyisa icandelo eliqaqambileyo lesifundo, owona mthombo wokukhanya ongundoqo wokufota. Ukukhanya okuncedayo: ngenjongo yokongeza ukukhanya kwindawo emnyama yesihloko, umthombo wokukhanya oncedisayo ...Funda ngokugqithisileyo »
Ukukhanya okukhanyisiweyo kucinyiwe kunye nonobangela wokukhanya okungomelelanga, kunye nendlela yokujongana nayo
Ixesha Post: Sep-18-2021
I-Led ixhaphake kakhulu kubomi bemihla ngemihla. Xa uyisebenzisa, ngaba ufumene ingxaki yokuba ukukhanya kweLed kucinyiwe kwaye ukukhanya kubuthathaka? Ukhe wayiqaphela le meko? Yintoni isizathu sokukhanya okuphantsi xa ukukhanya kweLed kucinyiwe? Kule meko, ndingayilungisa njani? Kule meko, ndinga ...Funda ngokugqithisileyo »
Ukukhanya koSasazo: Izizathu zokusebenzisa iiLights ze-LED
Ixesha Post: Sep-09-2021
Ukukhanyisa lelinye lawona macandelo makhulu anokwenza iprojekthi ichume okanye iflop. Xa ukukhanya kungalunganga, abalindi banamathuba amaninzi okuba bangathandi, bangakwazi ukulandela kunye nokuyeka ukubukela ngokupheleleyo. Ukuba ufuna abantu babukele, bonwabele, kwaye babuyele ngaphezulu, kuya kufuneka ke uqinisekise ukuba ...Funda ngokugqithisileyo »
Baphi abasebenzisi ekujoliswe kubo kwizibane zeringi?
Ixesha Post: Sep-08-2021
Kwibala lokufota, kukho uhlobo oludumileyo lwezixhobo, kukukhanya kwendandatho. Ukusetyenziswa kulula kakhulu: beka ukukhanya phambi kwesihloko kunye nekhamera embindini wesangqa sokukhanya ukuze udubule. Ngale ndlela, iifoto ezithathiweyo zihlala ziveliswa ngokulinganayo kwaye zimbalwa sha ...Funda ngokugqithisileyo »
Ungayithenga njani iringi yokugcwalisa ukukhanya kwevidiyo yodumo kwi-Intanethi?
Izibane zeringi ziya ngokuya zithandwa ngakumbi kwihlabathi losasazo ngqo kubadumileyo. Kule mihla yokuqhuma kolwazi, ngaba abantu abasisiseko babasasazi be-Intanethi basasaza ukukhanya? Ngoku wonke umntu angaqala ukusasaza. Ngethuba nje unokuba nesibindi sokubonisa ukuba ...Funda ngokugqithisileyo »
Umkhombandlela weSicelo sokuKhanya kwe-LED
1. Ukwakha izibane zangaphandle Ukuqikelela indawo ethile yesakhiwo ayiyonto ngaphandle kokusetyenziswa kwezibane ezijikelezileyo nezime okwesikwere ezilawula i-engam ye-boram, ehambelana ngokupheleleyo nomgaqo wezibane zesiko. Nangona kunjalo, ngenxa yelig encinci ye-LED encinci ...Funda ngokugqithisileyo »
Zeziphi izinto ezenziwa kukukhanya kwe-LED?
Izinto ezi-5 eziphambili zezibane ze-LED: i-chip, isibiyeli, iglu yesilivere, ucingo lwegolide, i-epoxy resin. 1. I-Chip Ukwakhiwa kwe-chip: Yenziwe ngephedi yegolide, P pole, N pole, PN junction, kunye nomaleko wegolide ongasemva (iphedi yedip kabini ngaphandle komaleko wegolide ongasemva). Isonkxiwe yindibaniselwano ye-PN equlunqwe ngu-P-layer sem ...Funda ngokugqithisileyo »
Yintoni ukuhlelwa kwezibane ze-LED?
1.Izibane ze-LED zahlulwe ngokombala oqaqambileyo webhubhu ekhanyayo Ngokombala okhanyayo wombhobho okhanyayo, unokwahlulwa ube bomvu, orenji, luhlaza (ohlulwe ube luhlaza-tyheli, luhlaza ngokomgangatho kunye noluhlaza ococekileyo), luhlaza okwesibhakabhaka ukukhanya njalo njalo. Ukongeza, idaydi ekhupha ukukhanya ...Funda ngokugqithisileyo »
Zithini iimpawu zezibane ze-LED ezifanele ukuhoywa?
Izibane ze-LED kufuneka ziqheleke kuwo wonke umntu. Izibane kunye nezikrini zokubonisa zezona sihlala sidibana nazo. Oku kukuqhubela phambili kwesayensi kunye netekhnoloji. Ii-LED ezincinci zinefuthe elikhulu kwaye zinempawu ezininzi. Oku kulandelayo kushwankathela izibane ze-7 ze-LED. Iimpawu, ukhawuleze ...Funda ngokugqithisileyo »
IGAMA LOKUKHANYA OKWAHLUKENEYO NOMSEBENZI KWI ...
Amagama kunye nemisebenzi yezibane ezahlukeneyo kwisitudiyo zezi zilandelayo: Isibane esingundoqo: khanyisa ...
Ukukhanya okukhanyisiweyo kucinyiwe kwaye kubangelwa ...
I-Led ixhaphake kakhulu kubomi bemihla ngemihla. Xa uyisebenzisa, ngaba ufumene ingxaki ukuba ukukhanya kweLed kujike ...
Ukukhanya koSasazo: Izizathu zokuSebenzisa i-LE ...
Ukukhanyisa lelinye lawona macandelo makhulu anokwenza iprojekthi ichume okanye iflop. Xa ukhanyisa i ...
Kwibala lokufota, kukho uhlobo oluthandwayo kakhulu lwezixhobo, yindandatho ...
Uyithenga njani iringi yokugcwalisa ukukhanya kwe-In ...
Izibane zeringi ziya ngokuya zithandwa ngakumbi kwihlabathi losasazo ngqo kubadumileyo. Ku ...
Abaxhasi bePaneli yokuKhanya, Iphaneli ekhokelwa ngoxande, Lamp Led Rgb, Ukukhanya kwensimbi, UkuKhanya okuKhanyisiweyo okuKhanya ngokuFota, Ukurekhoda Izibane ze Studio,